यी ७ कुरालाई कहिल्यै शंका नगर्नुस्, महापाप लाग्ने छ ! पढेर सक्दो सेयर गर्नुहोस्। – Hamrosandesh.com
यी ७ कुरालाई कहिल्यै शंका नगर्नुस्, महापाप लाग्ने छ ! पढेर सक्दो सेयर गर्नुहोस्।
७ देवताः देवताको विषयमा मनिसका अनेक अनेक सोंच हुन्छन् । तर कहिले काँहि आफूले सोंचेको कुरा नहुँदा र आपत विपद आइपर्दा मानिसहर देवता नभएको भन्ने गर्छन् । तर देवताप्रति अविश्वास पनि पाप मानिएको छ । किन भने आस्तिक भावनाले जीवनलाई सहज बनाउने मात्र होइन सकारात्मक भावना पनि दिन्छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका यी ७ कुरामा कहिल्यै पनि अविश्वास नगर्नुस् ।